Unai Emery oo hoos u dhigay fursada ay kooxda Arsenal ugu dagaalami karto horyaalka Premier League – Gool FM
(Arsenal) 07 Okt 2018. Macalinka kooxda Arsenal ee Unai Emery ayaa hoos u dhigay fursada ay Gunners u heli karto xili ciyaareedkan u dagaalamida horyaalka Premier League.
Wiilasha Unai Emery ee Arsenal ayaa waxay xasuuq ba’an ugu geysteen kooxda Fulham 5-1 kulankooda 8-aad xili ciyaareedkan ee horyaalka Premier League.
Goolasha kooxda Arsenal ayaa waxaa kala dhaliyay Alexandre Lacazette iyo Pierre-Emerick Aubameyang oo min 2 gool ah iyo Aaron Ramsey oo isna dhaliyay goolka kale.
Gunners ayaa haatan fariisatay booska kaalinta 4-aad ee dhanka kala sareynta horyaalka Premier League, waxayna 2 dhibcood oo kaliya u jirtaa kooxaha ku mideysan dhanka hogaanka ee Manchester City, Liverpool iyo Chelsea.
Unai Emery ayaa kulanka kadib yiri “Waxaan guuldareesanay 2-dii kulan ugu horeesay ee xili ciyaareedka ee aan la ciyaarnay kooxaha Manchester City iyo Chelsea, laakiin waxay ahayd inaan daganaan muujino”.
“Haatan waxaan gaarnay guulo muhiim ah, laakiin waa inaan sii wadnaa, maskaxdeena waa inay daganaan dareentaa, waxaan sii wadi doonaa shaqada adag waana ku raaxeysan doonaa”.
“Waxaanan dareensanahay inaan nahay kuwo wadajir ah, sida aan ku hor sameenay jamaahiirta kulankan”.
“Goolka saddexaad ee Alvaro Morata wuxuu ka tarjumayaa kubada cagta ee aan aadka u jeclahay”… Maurizio Sarri